Sool iyo Sanaag ma lagu aamini waayey wasiirka maaliyadda | allsanaag
Sool iyo Sanaag ma lagu aamini waayey wasiirka maaliyadda
Waa maxay sababta beelaha Warsangeli iyo Dhulbahabte loogu aamini waayey wasiirka Maaliyadda Puntland?
Labaatankii Sano ee Puntland jirtay, marna beelaha Dhulbahante iyo Warsangeli looma magcaabin wasiirka maaliyadda. Waana sababta bulshada ka soo jeedaa gobolada Sool iyo Sanaag ay is waydiinayaan sababta keentay.
Markii Puntland la asaasay waxa qabtay Wasiirka Maaliyadda Puntland aqoonyahankii ugu aqoonta badnaa cilmiga dhaqaalaha Puntland
Allah ha u naxariistee Siciid Maxamed Maxamuud (Siciid Caduur), oo ka soo jeeday Beesha Dishiishe ayaa noqday wasiirkii ugu horeeyey ee maaliyadda Puntland.
953-dii waxaa loo qaatay ciidamadii daraawiishta ee la oran jiray Wiilwaal oo saldhiggoodu ku yaallay magaalada Beledweyne
Wuxuu ka mid ahaa dadkii markii C/laahi Yuusuf raacsanaa xiligii uu gudoomiyaha SSDFahaa ayna isu raaceen magaalada Muqdisho iyo weliba dalka Itoobiya.
Xilkii ay beesha Dishiishe qabteen markii Puntland la asaasay, duhur cad ayaa la inqilaabay, Gaagaab iyo Faroole ayaa isaga danabeeyey, Intaa waxii ka danbeeyey taariikhda ayrrer gashay iyo meel caruurta laga korsado
Haddaan u soo laabto su’aashii ahayd maxaa keenay in labaatan sano wasiirka maaliyadda Puntland loogu magcaabi waayey qof ka soo jeeda Beelaha Dhulbahante iyo Warsangeli.
Su’aashan waxa ka jawaabi kara oo qura Barlamaanka Puntlabd oo Guddi xaqqiiq raadin ah u saara arintan . Ama baarlamaanka Puntland oo u yeedha madaxweynayaasii ugu danbeeyey Puntlandee ee Nool sida Faroole, Gaas iyo Deni. Iyaga oo la waydiinayo sababta ay ugu magcaabi waayeen beelahan wasiirka maaliyadda Puntland, si Bulshada goboladaasi iyo Soomaalida inteeda kale u ogaadaan sababta
← Sanaag Shacabkeeda iyo Xili Xasaasiyadeedka Maxaa Kala Heesta? Nin Ganacsade Ah Oo lagu diley Bosaaso. →